Home News Gabar uu dhalay Donald Trump oo taageero weyn u muujisay Ilhaan Cumar!!
Gabar uu dhalay Donald Trump oo taageero weyn u muujisay Ilhaan Cumar!!
Maadaama koofiyadda aysan diin la xiriirin, Wilson ayey wali mamnuuc ka ahaan doontaa in ay koofiyad ku xirato golaha koongareeska dhexdiisa.
Previous articleFarmaajo oo wakiil ka ah Abiy Axmad aya codsi u gudbin doono dowladda Talyaaniga. Waa Maxay…?
Next articleMareeykanka oo 37 oo Al-shabaab ah ku dilay gobolka Mudug!!
Ra’iisal wasaaraha Itoobiya oo fariin hanjabaad ah u diray Dalka Masar